Cristiano Ronaldo oo fariin qiiro leh u diray saaxiibkiis André Gomes, kaddib dhaawacii xumaa ee soo gaaray – Gool FM
Cristiano Ronaldo oo fariin qiiro leh u diray saaxiibkiis André Gomes, kaddib dhaawacii xumaa ee soo gaaray
(Turin) 04 Nof 2019. Cristiano Ronaldo ayaa fariin qiiro leh u diray saaxiibkiis ay isku wadanka kasoo wada jeedaan iyo kooxda Everton ee André Gomes, kaddib markii uu dhaawac naxdin leh ee aad u adaran ka soo gaaray kulankii ay xalay ku wada ciyareen Tottenham Hotspur horyaalka Premier League.
André Gomes ayaa wajihi doona halis ku aadan inuu garoomada ka maqnaado muddo hal sano ah, kaddib dhaawac xun ee soo gaaray inta lagu gudi jiray ciyaartii ay xalay kooxaha Everton iyo Tottenham ku kala baxeen barbaro 1-1 ah.
Gomes ayaa jabniin dhanka lugta middig ah uu soo gaaray kaddib kubad ay ku dagaalameen Heung-min Son, kahor inta aysan isku dhicin Serge Aurier, iyadoo maanta oo Isniin ah lagu sameeyay qaliin, waxaana la filayaa in muddo fog uu garoomada ka maqnaan doono.
War qoraal ah oo ay soo saartay kooxda Everton ayaa lagu sheegay inay u rajeenayaan 26 jirkan inuu si buuxda kaga soo bogsado dhaawaca soo gaaray, iyada oo laga cabsi qabo in xirfadiisa ciyaareed ay qatar gashay dhaawaca kaddib.
Laacibkii hore ee Barcelona ayaa helay fariimo garab istaag ah oo kaga yimid adduunka oo dhan, ee uu ku jiro saaxiibkiis Cristiano Ronaldo, kaasoo xaqiijiyay inuu ugu duceyn doono inuu si dhaqsi ah kaga soo caafimaado dhaawacan, isla markaana si dhaqso ugu soo laabto garoomada.
Cristiano Ronaldo ayaa fariin uu ku soo qoray boggiisa rasmiga ah ee “Instagram” wuxuu ku sheegay:
“Waxaan ugu duceyneynaa inuu si dhaqsi ah ku soo caafimaado, waan hubaa in Gomes uu kusoo laaban doono si awood badan”.
Nélson Semedo oo shaaca ka qaaday furaha ay kooxdiisa Barcelona ugu guuleysan karto Champions League
Chelsea vs Ajax, Barcelona vs Slavia Prague & Guud ahaan kulammada caawa la ciyaari doono ee Champions League